နာမည်: Centrifuge တောင်း
အစိတ်အပိုင်း / ပစ္စည်းများ / အရွယ်အစား / ဖော်ပြချက်
အမျိုးအစား: STMNCHFC1300 –T1
အမည်: Centrifuge ခြင်းတောင်းခြင်းလုပ်ဆောင်ချက် - ရေနှင့်ကျောက်မီးသွေးအညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားခြင်းအမျိုးအစား - STMNVVM1400-T1 အစိတ်အပိုင်း / ပစ္စည်းများ / အရွယ်အစား / ဖော်ပြချက် 1. စွန့်ပစ်ခြင်းအနားကွပ်: Q345B / OD 1480mm / ID1409mm / T40mm / "X" တတင်းတလုံးပါ ၀ င်သောအပေါက် 2.Drive အနားကွပ်: Q345B / OD1010mm / ID925mm / T20mm / "X" တင်ပါးတစ်ချပ်။ ၃ ။ ဖန်သားပြင်: ကွင်းကြိုး / CuSS 204 / PW # 120 / Gaps 0.4mm / Spot သည် # SR250 ၂၅ မီလီမီတာစင်တာများ / ၄ ခုပါ ၀ င်သော # SR250 လှံတံပေါ်သို့ဂဟေဆော်ခြင်း။ SS304 / T12x655.Highness: 810 မီလီမီတာ 6.Half Angle: 15 ° 7.Stiffened ဒေါင်လိုက်ပြားချပ်ချပ်ဘား: Q235B / 12PCS / T6mm 8.Stiffe ...
အမည်: Centrifuge ခြင်းတောင်းလုပ်ဆောင်ချက် - ရေနှင့်ကျောက်မီးသွေးရေညှိဖယ်ရှားခြင်းအမျိုးအစား: STMNVVM1650-1 အစိတ်အပိုင်း / ပစ္စည်းများ / အရွယ်အစား / ဖော်ပြချက် 1. စွန့်ပစ်ခြင်းအနားကွပ်: Q345B / OD1744mm / ID1679mm / T40mm /“ X” တလုံးရိုးတံ ၂ 2. မောင်းနှင်နိုင်သောအနားကွပ်: Q345B / OD1270mm / ID1075mm / T28mm / "X" တတင်းတလုံးဂဟေ ၃ ခု။ မျက်နှာပြင် - Wedge wire / SS 304 / PW # 120 / Gaps 0.4mm / Spot သည် # SR250 လှံတံ ၂၅ မီလီမီတာအလယ်ဗဟို / 4pieces တွင် 4. welear cone: SS304 / T12x755။ မြင့်မားသော: 952 mm 6.Half Angle: 15 ° 7. တောင့်တင်းသောအပြားပြား: Q235B / 12PCS / T8mm 8.Stiffened ...
အမည်: Drive Beam လုပ်ဆောင်ချက် - Exititers တပ်ရန်အသုံးပြုသောအမျိုးအစား - ၃၀၀/၆၁၀ တုန်ခါမှုမျက်နှာပြင်အစိတ်အပိုင်း / ပစ္စည်းများ / အရွယ်အစား / ဖော်ပြချက် Q345Bmm / ပြည့်စုံသောဂဟေဆော်ခြင်း / ပြည့်စုံသောစက်ယန္တရား / ရာဘာဖြင့်ဖုံးအုပ်ခြင်း / ဆေးသုတ်ခြင်းအမည် - Cross Member ရာထူး - ပံ့ပိုးရန်ကုန်းပတ်များအမျိုးအစား - ၃၀၀ / 610 တုန်ခါမှုမျက်နှာပြင်အစိတ်အပိုင်း / ပစ္စည်းများ / အရွယ်အစား / ဖော်ပြချက် Q345B / ပြည့်စုံသောဂဟေဆက်ခြင်း / ပြည့်စုံသောစက်ပစ္စည်း / ရော်ဘာအပေါ်ယံပိုင်း / သုတ်ဆေးအမည်: Cross Lifting beam & Cross ပိုက် Function: ဘေးဘက်နံရံများကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ခြင်းတွင်အသုံးပြုသောအမျိုးအစား: ၃၀၀/၆၁ ...
ပစ္စည်း input ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်
အမျိုးအစား: 360/610 တုန်ခါမှုဖန်သားပြင်
Q345B / ပြည့်စုံသောဂဟေဆက်ခြင်း / ပြည့်စုံသောစက်ပစ္စည်း / ရော်ဘာအပေါ်ယံပိုင်း၊ ဆေးသုတ်ခြင်း
အမျိုးအစား: D100-600mm / L200-3000mm
Q235B / ဆေးသုတ်